Waa maxay sababta aan ma Hel Xaas Sidaas Young? — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waa maxay sababta aan ma Hel Xaas Sidaas Young?
Shalay waxaan ka dhigay stop soo daahay habeenkii at dukaanka in ay la wareegaan dhawr waxyaalood oo waxaan lahaa wada hadal aad u xiiso badan iyadoo shaqaalaha dukaanka. Waxaana ka yeellay hadal yar sidii ay baadhayaan waxyaabaha aan, ka dibna waxay ii bixiyeen card dhimis laakiin waxaan iyada u sheegay xaaskeyga horay mid. Taasi waa marka wadahadalka helay xiiso leh. Waan ogahay hadalka this dhan aad si fiican sababtoo ah waxaan u haystay marar badan ka hor. Waxaa wax sidan oo kale ...
Person: Waa maxay!? Waad guursaday?
Me: Haa Waxaan la guursaday laba sano iyo bar la yaab leh.
Person: Immisa jir ayaad tahay? Waxaad u eg ilmo.
Me: Waxaan ahay saddex iyo labaatan,.
Person: si dhallinyarada ah Waxaad tahay! Maxaad adduunka aad samayn lahayd in?
Me: Waa maxay sababta ma uu doonaynin waxaan?
In 2009, Waxaan guursaday jir ah oo kali ah sharciga iyo dirqi mudan ka mid ah intii labaatan sannadood jirtay. Intii aan saaxibo, hawlgelinta, iyo guurka gaaban, Waxaan ka codsaday waqti iyo waqti mar kale su'aalaha sida, "Maxay sababta la isu guursaday si dhallinyarada ah? Waa maxay cawdu?”, oo aan jeclaa shakhsiyeed, "Waa in aad ku sugaynay iyo riyaaqay noloshaada!”
Qaar ka mid ah dadka waawayn ee waydiinaya su'aalo kuwanu waxay ahaayeen shisheeyayaal, laakiin qaar ka mid ah ay ahaayeen qoyska. Oo waxaan waalan in guursaday ee noocan oo kale ah "da'da yar” da'da?
Well i sii daa aan ku siin saddex sababood oo waxaan go'aansaday inaan is guursaday markii aan sameeyey.
1. Waxaan la kulmay qof dumar ah oo cibaado leh
Sida Freshman ah siddeed iyo toban sano jir ah in kulliyadda Bible, Waxaan ahaa ma firfircoon uga raadinaya naag, laakiin Ilaah wuxuu arkay taam u yahay inuu ii soo bandhigo in haweeney dhallinyaro ah qalbigiisa ka dib. Waxay ahayd qurux badan, laakiin ka sii muhiimsan ayay jeclaaday Ciise. Waxay ahayd war in ay dembi u baahan nimcada Ilaah ee, oo iyana waxay lahaayeen kuwa is-hoosaysiiya a, wadnaha barikaro. Waxaan dhamaaday isagoo qayb ka mid ah kaniisadda isla, sidaa darteed waxaan ku helay si uu u daawado iyada adeegi, koraan, iyo si daacad ah la siiyo, iyada oo waqti ay dadka kale. Waxaan bilaabay in ay ka hadlaan in aan goobada gudaha iyada ku saabsan. Saaxiibbaday way, hagayaal, iyo wadaaddada oo dhan ku heshiiyeen – oo iyana waxay ahayd gabadh cibaado. Waan arki karaa naftayda iyada la socda oo iyada jecel inta ka dhiman nolosheyda.
2. Waxaan diyaar u ahaa
By Wakhtigan oo kale ayaan bilaabay inuu ka fikiro xaqiiqada dhabta ah ee guurka iyo waxa ay ka dhigan tahay in aad naftaada ku ammaanee qof ee Meyeydaan. Waxaan is weydiiyay in ama aan waxaan ahaa baaluq oo mas'uul ah oo ku filan. Waxaan baadhay iyada oo Qorniinka oo u maleeyay oo ku saabsan waajibaadka ninkeeda a, oo la hadlay saaxiibo xaas iyo hanuunin bixiya. Ka dib markii badan oo salaadda iyo wada hadalka, aan lataliye iyo wadaadada ee aan kaniisadda ii sheegay waxay u maleeyeen inaan diyaar u eryan iyada ahaa. Waxaan la Isku Kibriyey. Laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan iyada eryadeen haddii aan u maleeyay in aanan diyaar u ruuxa iyada keeni, siin iyada, iyo in uu noqdo madaxa qoyska.
3. Guurku waa barako
Marka hore waxaan dareemay sida aan lahaa si ay u caddeeyaan in ay u duwaan in is guursan dhalinyaro ah waa ok mararka qaarkood. Laakiin markaan ka sugayay in Qorniinka ma aanan helin waxyaabo la mid ah, "Guurka uyeelaysaan kuwo la dilo! ka carara!” ama, "Guurka Dhig ilaa aad ma u gelin karaa off mar dambe,” ama, "Heli Kaliya guursaday marka aad aad u gabowday in ay helaan nolol,” ama, "Play duurka oo in muddo ah ka dibna qaado ka mid fiican.”
Halkii waxaan helay amarrada sida, "Carara damaca dhallinyaro ah”, oo aan akhriyey aayado sida Proverbs 18:22 oranaya, "Kii afo helaa wuxuu helaa wax wanaagsan oo ay hesho Nicmo Rabbiga.”
Oo markii dadku odhan, "Waxa aad yeelan lahayd in aad is guursanaayo si dhallinyarada ah?” ii jawaab cusub, "Tahay in aad weydiinaya su'aasha qaldan.” Waxaan qabaa ee asalka u ah su'aashaas waa siday maleeyeen in guur iga xado wax iska, sida haddii yaraantaydii la khasaariyey jacayl qurbaanka ka go'an marka loo isticmaali karo raaxaysi aan joogtada ahayn oo flakiness.
Guurku waa hadiyad qurux badan oo xagga Ilaah ka! Waa hab ka mid ah nimcada. Waxaan helay naag, iyo in uu yahay wax wanaagsan. Waxaan aadan ku raacsanayn macquulka ah in ayaa sheegay in, dhigay off barakooyinka taajirsan Ilaah ilaa iyo inta aad awooddo. Halkii Waxaan dhihi lahaa raaxaysan hadiyado wanaagsan Ilaah oo iyaga kari maysid, waayo, Ammaantiisu.
Tani ma aha in la yidhaahdo in qof kasta waa is guursaday markii aan sameeyey. Waxaa aadi lahaa xun haddii aan isku dayi laheyd inay guursato ka hor inta aan diyaar u ahaa. Qaar ka mid ah oo naga mid ah u baahan tahay si ay u hagaagaan more, iyo kuwa kale oo naga mid ah waxay u baahan yihiin si ay u tukadaan raalli oo ku kalsoon Sayidka iyo waqtiga. My gool ma aha in la yidhaahdo in ka yar aad guursatay, ayaa in ka badan quduuska ah waxaad tahay. Waxaan rabaa in aan kala firdhinta quraafaad ah in aan dib u qaangaarnimada iyo kaliya ka fiirsan guurka mar nahay ama soddon ka weyn.
Habeen Last on qof twitter i weydiiyay haddii aan ka shalaayi is yar guursaday. My jawaab? Absolutely ma.
Waa mid ka mid ah go'aanada ugu fiicnaa ee aan abid dhigay. Waxaan ahay faraxsanaan iyo taagnow badan waxaan ahaa laba sano iyo bar ka hor, iyo in ay tahay wax wanaagsan. Ma doonayo in la sameeyo in ay u muuqato sida aan ahay qaar ka mid ah cillad super dhif. Waan ogahay badan oo waawayn, kuwaas oo guursaday sidii dhallinyarada ah ama ka yar oo aan aniga ahayn. sidoo kale waxay ku arkay guurka sida hawl hadiyad ah oo ay arkeen midhaha hadiyad in. Me iyo xaaskeyga waxaa laga yaabaa in dhallinyarada, laakiin waxaan ku tukanayeen for nimco xaaskeyga jeclahay sidoo kale ilaa dhamaadka nolosheena. Ilaa markaas waxaan doonayaa in aan ku addeeca xigmadda Proverbs iyo "ku faraxnaa naagtii yaraantaydii.”
Jannon Fitzpatrick • August 19, 2013 at 6:58 waxaan ahay • Reply
Waxaan si xushmad leh aadan kula raacsaneyn Kevin Ferere. Ma ogaan kartid waxa jacaylka waa ilaa aad ku garanayaa kii Ilaah waa, maxaa yeelay, Ilaah waa Love! Kitaabku waxa uu wax ku saabsan shukaansi ku wareegsan ama la dhaqanka dadka kale si aad u hesho mid ka mid ah oo aan ku odhan. Dhab ahaan, Isaac layed on on Rebecca iyo ogaa in ay tahay mid ka mid ah isaga u. Oo isagu ma uu taariikhda ku xeeran ama la hadal Lee'ah inay sidaas haddii ay si fiican u ahaa si uu ogaan lahaa in ama aan Raaxeel waxay ahayd run ahaantii waxa uu rabo ama ma.
Isagoo ka hadlayay ka aan waayo-aragnimo u gaar ah, Aan ku sameeyey taariikhda dadka kale oo laga helay waxa jacayl ma ahaa. Ma aha oo kaliya ka soo xiriir aniga ii gaar ah, laakiin ka Waalid’ wiilal iyo gabdhoba’ xiriirka. Dhibaatadu waxay ahayd, iyagu ma ay xiriirka ayaa ku salaysan Word ama Love Ilaah, waana sababta iyagu ma ay shaqeeyaan. Aan ku sameeyey heli Man sida Ilaah doonayo a, sidaa daraadeed waxa uu ka shaqeyn kartaa jidka aad u tidhaahdaan, LAAKIIN waxaan kal iyo laab ah waxay aaminsan yihiin in haddii aan sugaynay lahaa oo qalbigayga ka mid ah kuwa xiriirka kale ee aan xaq ii dhawray, Waxaan noqon lahaa meel aad u fiican oo ka yar jabay, ninkaygii marka laga eego qof dumar ah sida Ilaah doonayo ee la igula soo halkii aragtida qof dumar ah oo jaban ee la Alaabtoodii in ay ka shaqeeyaan iyada oo loo marayo.
No ixtiraam loogu tala galay, laakiin waxaan aaminsanahay in uu yahay war qoraal ah oo inta badan ka qaldan buste in dhab ahaantii wadid yaabaa qalbiyada dhallinyarada dhinaca qaldan. (macluumaadka ku saabsan Google shukaansi sida Ilaah doonayo vs. Modern shukaansi. Waxaa jira qaar ka mid ah alaabtii fiican in halkaas.)
Deborahfatuade • August 19, 2013 at 6:59 waxaan ahay • Reply
Tani waa awsome
KevinFerere • August 19, 2013 at 6:59 waxaan ahay • Reply
Waxa kale oo aad ii xaq u cadeeyay. Kitaabku waxa uu dhihi karaa wax kasta oo ay doonayso, laakiin aad tahay waayo aragnimo waa in aad u leeyihiin in ay ka baxaan dhammaan. Oo kan aad ugu yeedhaan Ilaah timaado ka dulucdii ka mid ah waxa aad baray iyo waayo-aragnimada. Dhamaadka, waxa aad rumaysan tahay in doorasho, laakiin waxa aad og tahay soo rogay by xaqiiqada.
Oo haa, war waxaa laga yaabaa in waxoogaa guud a, laakiin waa in la qaato oo hadhuudh ah oo cusbo, sida in wax.
Lokelani70 • August 19, 2013 at 7:00 waxaan ahay • Reply
Sidoo kale waxaan si xushmad leh aadan kula raacsaneyn Kevin Ferere.
Waxa kaliya ee in la cadeeyay waa in aad go'aan niyada ma in ay ku noolaadaan nolol aad waayo, Ilaah wuxuu iyada oo uu eray, Kitaabka Quduuska ah. Halka, Waxaan ka yeellay go'aanka ah in wadan karno nolosheena ee guur sida Ilaah doonayo, iyada oo ereyga Ilaah. Xaqiiqda ayaa ah arrinta waa, mid ka mid ah kuma yeelan doono fahamka buuxa oo blog this haddii Ilaah ma gelin ugu horeysay ee ka mid ah nolosha.
Duceeya ALL guurka! Ilaah ammaan!
KevinFerere • August 19, 2013 at 7:00 waxaan ahay • Reply
Waxaan samaysay go'aan miyir leh si aad u hesho Ilaah naftayda oo aan waxa qof ayaa i baray. Ha welwelin, Waxaan u noqon oo kaliya in aad sida loo isticmaalo.
Kaliya waxaan jeclaan lahaa in la yidhaahdo, ma waxaad ka heli kartaa Ilaah. bible ayaa sheegay in aanu nahay dhintay. dadka dhintay waxba ma samayn karo. Ilaah noo helaa.
Oh… sidaas Waan ka xumahay Kevin, waa in aad la wareersan. Ilaah wuxuu u adeegaa ma aha Ilaaha is-doonka. Walaac, ma aha doonista Ilaah, laakiin felisin jecel sida ugu badan ee uu nagu soo jecel yahay waxaa! Sida aan hore u qoray, Ilaah gelinaya marka hore waa waxa loo baahan yahay in ay fahmaan WADA blog this, sida aad reply daliil aan dhibic. WAX KASTA aynu nidhaahno iyo sameyn waxaa laga yaabaa inuu Ilaah ka farxiyey. Ilaah ammaan iyo naftaada leeyihiin cajiib fiidkii ah.
Fru-Mukete Arnold • August 19, 2013 at 7:00 waxaan ahay • Reply
hahaha, sii raadinaya, aad isaga ka heli doontaa- xusuuso abuurka sidoo kale isaga ayaa shaaca ka qaaday. Dhab ahaan, Waxaan idin siin doonto trick ah, kaliya qaado Kitaabka Quduuska ah oo taga tuuro sida buug sheeko xusay dhamaan sheegashada ah waxa ay taasi iyo xataa Markaasaan iyagii u xafididda, hubi buugaag kale oo is barbar sheegay. Laakiin xaqiiqdii aad u baahan doontaa qof aad sharaxdo somethings, aadan dib u qabo tan iyo markii aad tahay magangalyo-a run ah.
Haddii aad aaminsan tahay in Ilaah sida ugu badan ee aad idinku samayn, maxaad aad dareento baahida loo qabo in isaga la caddeeyo aad u badan? Anigu ma u leeyihiin in ay Ilaah, maxaa yeelay, wuxuu ii. Anigu waxaan ahay isaga oo isna wuu ii yahay. Laakiin waan ka xumahay, ma waxaad fahmi kartaa in aad awoodid?
Delinabini • August 19, 2013 at 7:01 waxaan ahay • Reply
i diidan tahay sida aad u noqon kartaan Ilaah iyo sida Eebe u noqon kara in aad ayaad dhab naftaada abuuro haddii aad Ilaah?
KevinFerere • August 19, 2013 at 7:01 waxaan ahay • Reply
My xun, typo: *Aanan haysan si ay u caddeeyaan Ilaah. *
Laakiin comment ka dhigan tahay waxa uu sheegaayo. waa wax alla wixii aad gudahood, taasu waa wixii aad tahay. Ha ka baqin in ay aqbalaan runta in kaliya sababtoo ah aad wax ku baray in ay khalad.
Addis Hunter • August 19, 2013 at 7:01 waxaan ahay • Reply
100 % aad la! aad ninkayga aan la kulmay ee 20 oo sannad ka dib waxaan la guursaday. Waxaan lahaa in ay leeyihiin wada hadalka isla shisheeyayaal random, qoyska iyo saaxiibada iyo Waxaan doonayaa in aan kugu dhiirinaynaa in aad aamin u ah Eebahay iyo xaaskiisa qurxoon joogo jidka kasta oo la discribed hadalka. Aniga, saygayga hadda jira 30 sano jir ah oo markii aan dadka u sheego Waxaan “si farxad leh” guursaday muddo ku dhow 10 sano ay Dahay!!! “Really”?? Samaynta comments isku caddayn ah “luminaysid yaraantayadii” iwm iwm. Laakiin ahu ayaa si naxariis iyo wanaag noo ah in aan muujiyo iyocadhadii in erayada sida barakaysan inaan ninkayga ayaa la kulmay markii aan sameeyey. Waxaan jecel reminising on sano college our wada, iyo riyoodaan oo ku saabsan waxyaalahan waaweyn oo dhan in nolosha ayaa noo hor! Waxaan leenahay 2 gabdho qurux badan iyo wiil ay jidka ku a (in aan si Khashuue ah u baryay sanadkan oo Ilaah siiyey) , (atually Waxaan ahay sabab maanta ;-))..oo aan couldnt badan xaqiijiso in uu ahaa ururka Devine ah ka timaada Ilaaha wada noo keeno.
Dabcan, MA aan kaamil (inkastoo saaxiibaday u muuqdaan in ay si qabaa, maxaa yeelay, aan waxba ka fool dhibaatooyinka caamka ah ee dunidatan of xadgudubkii, ixtiraam iyo Murankii joogto ah), laakiin waxa aan is khilaafsan, isbeddelo ah niyadda, dificulties dhaqaale iwm, farqiga waa in aan Tiirsan on Ilaah si uu u hoggaamiyo tallaabooyinka our, waxaan ixtiraamaan mid kale oo isku day ugu fiican si aan marnaba lumin RUMAYSAD, isgaarsiinta, iyo Hanuun ruuxa quduuska ah sidii laba doondoono oo individually..My ninkeeda waa qofka ugu gaar ah ee aan la kulmay oo aan labadaba la fahmo in ay fure u tahay farxad in guur MA waa in samaynaya ama gadashada “wax” si ay u sameeyaan isku felisin faraxsanahay laakiin ogyahay cidda aynu nahay in Masiixa, ka dib markii amarradiisa ku saabsan guurka iyo jecel mid kale oo shuruud la'aan, iyadoo aan loo eegin ayna duleella ama sida aan laga yaabaa “dareemaan” la joogo in , og farxad in had iyo jeer waxay noqon doontaa dareen ku meel gaar ah in iska tagaa, laakiin farxad runta ah oo keliya ka timaadaa Rabbiga.
Waxaan jeclaan lahaa adiga iyo xaaskiisa oo sanado badan oo farxad barakaysan!!!
Waxaan aad u jeclaada aad music iyadoo jidka ag fadhida ;)..
Josh • August 19, 2013 at 7:01 waxaan ahay • Reply
Waxaad tahay tusaale weyn oo dhalinyaro ah Masiixiyiinta ah kuwaas oo doonaya in ay Ilaah sida ay ula dhaqmaan dumarka ammaani! Mahadsanid! kaliya waxaan helay hawlan, waxaan ahay 22, iyo weeraryahanka Rabbiga u adeegaya oo guur sanadaha soo fiirin!
Johnny_renteria • August 19, 2013 at 7:02 waxaan ahay • Reply
Rumayso ama ha rumaysan, laakiin i guursaday da'da 18. Waxaan ku jiray jid uma diyaar u ah inay ninkeeda ah ee dareenka dhaqaale ahaan iyo waxaan hore u ahaa aabbe. Laakiin waxaan uun noloshayda faraha uga qaaday inay Masiixa iyo waan ogaa in dumarka aan la jiray noqon lahayd mid ka mid ah koraan ila. Dadka ii waxyaalahaas oo kale iyo sidoo kale weydiin. Waxaan u arkaa in ay murugo inkastoo guurka la arko sida wax xun. Maanta, Waxaan ka fekerayay ku saabsan oo aan garawsannay yimid in qof ay noqdaan dad danayste in fikirka masuuliyad qof kale ku dhowaad aan macquul ahayn. Guurka ma aha oo ku saabsan goorta iyo sababta aad u guursaday laakiin ku saabsan oo la ajande guurka in. Oo waa inuu noqdaa Masiix…
Debooraah • August 19, 2013 at 7:02 waxaan ahay • Reply
i qabaa u r trip..i xaq u leeyihiin frnd ah oo guursaday @ 19 (waxay HV lagu guursaday 4 6 WG sano)n lkng @ iyada hadda waxaan ognahay ka aqbalay Masiixa iyada DAT nolosha marka laga reebo waxaa d go'aan fiican ayay uu sameeyay….in kastoo i waa galin i diyaar ma ihi 2 heli married..it ii nixiyo sababtoo ah i aadan rabin 2 la khali 2 qofka qaldan d 4 nasasho d nolosheyda laakiin waan ogahay Ciise marnaba ha ii dhigi d doorasho khalad…sidoo kale i mararka qaarkood isweydiinaa y is guursaday i heli waxaan rabaa in aan ka Ciise dhan n isagu marnaba brk karaa HRT?….ur uu go'aankoodu sax ahaa n i GV u suulka kor u 4 taas oo!:)
MNM103 • August 19, 2013 at 7:02 waxaan ahay • Reply
Tani dhab ahaantii i baray wax badan oo. Oo wuxuu ku weynaa maqalka dhinacaaga naagtii waxaa ka mid ah mid aad u!
Lance Peterson • August 19, 2013 at 7:02 waxaan ahay • Reply
Awesome. Wiilkaygiiyow sidoo kale guursaday 2 1/2 sano ka hor in qof dumar ah oo cajiib ah cibaado leh oo labadooduba way da 'bislaado jir ah 19. Your story i waaniyo aayadaha.
Brandon Clements • August 19, 2013 at 7:02 waxaan ahay • Reply
Waan jeclahay Trip this! Waan guursaday at 22 oo gabi ahaanba waan jeclahay guurka. Waa funny sababtoo ah waxaan kaliya lahaa wada hadal la mid ah la ah midiidinka saldhiga gaaska ku saabsan bil ka hor. Waxay soo jiidayaa oo dhan, “Waa maxay sababta aad u guursato marka aad yeelan kartaa caanaha for free?” su'aashan oo qalbigayga ka qarxay iyada. Oo haddana waxaan tegey inuu iyada u sheeg in xaaskeyga ma ahaa sac–in ay ahayd mid laga cabsado oo aan iyada jecel.
safarka • August 19, 2013 at 7:02 waxaan ahay • Reply
loool aad tahay funny = D
Louib2001 • August 19, 2013 at 7:02 waxaan ahay • Reply
Rabbiga ammaana aad walaalkaa iyo naagtaada qurxoon ee dhallinyarada loogu talagalay. Waxaan Ilaah ka baryayaa in Rabbigu ku shubi doonaa Nicmada joogto ah noloshaada oo dhan, maxaa yeelay, eraygii aad ku addeecay. Aniga 28 waxaana lagu hadda guursaday muddo ku dhow laba sano iyo xaaskeyga oo waxaan haystaa guur farxad iyo la jecel yahay a 10 ilmaha jir aboor. Waxaan mar walba rabay in aan guursado yar, laakiin waxaan aaminsanahay in ay lama waqtiga weli ii ilaa Rabbigu wax wanaagsan ku dhowaad keenay 5 sano ka hor (in ay noqon sax ah aan la kulmay maalintii aan helay mar kale dhalan 31 Dec 2006). Anigu ma aan ogayn meel ay ku Qaddarray wada noqon sidii aan u kaxeeyey sida walaasheed caadi ah ka kaniisadda. Waxaan sidoo kale waxaa diirada on koritaanka ruuxiga ah aan, laakiin seddex sanno ka hor uu indhaha ii furay iyo inta kale sida ay yidhaahdaan waa taariikh.
Waa in ajandaha Shaydaanku loogu talagalay dadka aan la guursaday, si ay ku nool yihiin dambiilayaal ah, waxaana hore u aqaano waxa dhici doona. Ma waxaan u eegay at heerka of furiinka ee jirka maanta? Sidee ku saabsan oo walaalo ah iyo walaashay fornicating ee kaniisadda, sababta oo ah waxa bulshada xukunka dilka ah.
Haddii aan eegno sida magaalooyinka waxaa ka buuxsamay dulmi dhalinyarada maanta, aan qaado daqiiqad si ay u malaynayso in qaar ka mid ah sababaha asalka? Nin daqiiqad sarrifka The qiyamka si Ilaah raalli for kelidaa wareeg ah waxan oo dhan ayaa ku dhacay marka laga reebo. Xitaa waalidiinta Christian yihiin, aqoonla'aan u qaadida kelidaa wareeg ah by niyad carruurtoodii ma in aan is guursano oo dhallinyaro ah (at da'da walaac cad). Sababaha ay yihiin, waxaan soo qaadan”aad u baahan tahay si aad u hesho waxbarasho, waxaa laga yaabaa in marka aad ku dhameysan sayidyadiinna iyo shaqo hufan, ka dibna bilowdo in aad ka fikirto guurka”. codka Taasi caqli leh ma waxaa ? Sidaas waxa dhaca marka ilmahaagu Christian waa aado jaamacad ka dibna guuro in la saaxiib wiil / gabar, kuwaas oo ka mid ah Christian ama aan?
Fadlan ha ka heli qalad i(in kaliya qaar ka mid ah waxyaalaha aan ku iman ee guud ahaan), maxaa yeelay, war kor ku xusan ma khuseeyo oo dhan. Waxbarashadu waa mid aad u muhiim ah sidii mid keensataa aqoonta ay xirfad kala si ay u shaqeyn karaan iyo in la siiyo mustaqbalka qoysaskooda iwm, laakiin guurka caadadiisu joojiyaan mid ka guulaysato in waxa abid degaanka ee nolosha ka mid doorto in uu raaco, sida arrin xaqiiqada guur guud ahaan kor u koritaanka i.e wasaaradda weyn, geed wanaagsan, Xoolo iyo liiska on tagaa. Xusuuso laba uu noqdo mid jidhka iyo eryan karaa 10 000 wow, in ka dhigan tahay in heshiiska waxa abid Ilaah waxay ku warsan si daacad ah ay u gaadhaan, cabsado…..
In ku dhow waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo jeedinaynaa in aanu sida Masiixiyiintu u bilaabaan wax baraya caruurta our da 'yar ah oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay nool ugu horeysay waayo, Ilaah iyo marka labaad muhiimadda ay leedahay guurka( kuwa aan kuwa la siiyey isku hadiyaddii,) si ay u koraan oo raba in Ilaah aagga this ka farxin. Mar labaad si wanaagsan la sameeyey walaalkay iyo kuwa ereyga Ilaah oo nool oo dhan. joog barakaysan.
Anna • August 19, 2013 at 7:03 waxaan ahay • Reply
Tani dhab ahaantii ila hadlay. waxaan ahay 21 xiriir oo anna ma aan kuu sheegi karaa inta jeer ee aan loo sheegay in aan ahay “aad u yar in la fikirka ku saabsan gelida hoos”, waa in aan sugaa in “nolosha live ugu horeysay”, dhameysan dugsiga iyo in la dhiso mustaqbalkiisa ciyaareed ka hor inta aanan geli courtship / guurka. Waxaad markhaati cajiib ah oo dhiirigalin leh. wada ayaan adiga, iyo naagtaada rabto Meyeydaan oo barakeysan iyo farxad!
si qarsoodi ah • August 19, 2013 at 7:03 waxaan ahay • Reply
Aniga 20 oo weligayo in xiriir sidaas ma doonayo inaan in la guursaday by 21 laakiin xaqiiqdii waxaan ixtiraamayaa aad macquulka ah. Waxaan mar walba leeyihiin caqliyaddii “in kasta oo isaga u gaar ah”. Waxaan qabaa adiga, iyo naagtaada hubaal tegi doonaa fogaanta iyo han tallaabooyinka aad ka qaaday ka hor inta aan guurka aan ahay. Waxa ay u muuqataa labadiinaba aad committment soo qaaday si aad u daran, kaas oo aan u bogaadinayaa.
Tony Doyley • August 19, 2013 at 7:03 waxaan ahay • Reply
Aad u barakeeyey in ka akhriyi aad blog ah oo ku saabsan guurka da'da hore. Xaaskeyga guursaday at 18 oo aan lagu farxad leh is guursadeen 10 sano haatan. Sure waxaan lahaa qaar ka mid ah si taxne kore iyo, laakiin waxaan rumaysanahay in Ilaah ayaa na tartiib sano oo dhan hanuuniyey iyo iminka waxaan nahay xoog badan sidii hore. Waad ku mahadsan tahay marag yaab leh.
KLE Photography • August 19, 2013 at 7:03 waxaan ahay • Reply
Hambalyo on guurka dhallinyarada! Aniga, saygayga mareen wax la mid ah marka aan guursaday 8 sano ka hor at 20 sano jir ah! Si aanu u ogaano dhab ahaan waxa aad ku socoto iyada oo loo marayo! Dadka u maleeyay in aan guursaday maxaa yeelay, waan uurka leh (Anigu ma ahaa) ama maxaa yeelay, wuxuu ahaa shisheeye sharci darro ah (uu muwaadin American). Ma aanan haysan wax badan oo saaxiibadeena ku jira geeska sida ay samaynayaan wax hal. Laakiin hadda at 28 waxay ku wareegsan waxaa iman oo isku dayaya in ay “gaadh.” Waxaan ku faraxsanahay Ilaah i barakeeyey la ninkayga loo eegin da. Ilaah labadiinaba aad ku barakeeyo!
BTW Waxaan ku nooshahay aagga DMV ah! (MD) waxaa laga yaabaa in aynu wada kulmi karaan ama kaniisadda wada! Waxaan weli aan haysan saaxiibo guursaday lol.
KevinFerere • August 19, 2013 at 7:03 waxaan ahay • Reply
Uma maleynayo wax la soo xaday aad ka, waa waxa aad Quusan. Waa qabow in ay leeyihiin qaab-dhismeedka ee Kitaabka Quduuska ah, laakiin waa in aad daalina inaad quortann wax noloshaada, ma kitaab; inkastoo hanuun ah in waxa uu siiyaa.
Waa qabka ammaan ka go'an iyo dhallinyarada, laakiin qayb ka mid ah in “damaca dhallinyaro ah” waa barashada iyo sii kordhaya aad ka hesho shirka iyo bulsho ku hawlanaa haweenka kala duwan. Barashada waxa aad jeceshahay oo ma jecla in la sameeyo, arki, iyo dareemaan; halkii aad baaxadda lagu sidaas ku koobnayn oo kaliya hal qof.
Waxaad dhab ahaan ma dhihi karo waa ku garanayaa kii aad tahay iyo waxa aad tahay oo ku saabsan, ama wax alla wixii aad dhabtii doonaysid, haddii aadan ku milmay laakiin si ka badan haween kale si ay u muujiyaan in aad si. Waxaad ma aqaano waxa Love waa haddii aadan aqoon waxa ay ma.
Guest • August 19, 2013 at 7:03 waxaan ahay • Reply
Uma baahnid in aad in aad ogaato waxa Love ma aha haddii aad ogtahay waxa Love waa. Sidee baad ku ogaan lahayd haddii qof ku siinayaa been abuur ah $100 biil haddii aad ogtahay waxa dhabta ah $100 biilka u eg. Waxaa jira mid dhab ah oo keliya $100 biilka, kaliya baran in oo kuu sheegi karaa marka qof ku siinayaa been abuur ah. Isla jacayl. Waxaa jira been abuurka badan halkaas, laakiin haddii aad ogtahay waxa dhabta ah waa, markaas ay awoodaan in ay goobjooga been abuur ah aad noqon doontaan. Tan iyo markii Ilaah waa jacayl, wax aan cibaadada lahayn jacayl ma noqon karo.
KevinFerere • August 19, 2013 at 7:04 waxaan ahay • Reply
Sidaa awgeed waa in aad ku dhawaad ​​taariikhda iyo kulmaan iyo galmo dad kale. My dhibic si sax ah. waa kuwa aan cibaadada lahayn Waa maxay shakhsi ahaan. Waxaad isku dayi kartaa in aad noqon dhagan oo ku saabsan sababta oo ah waxa ku jira dabiiciga ah inay sidaa sameeyaan, Si kastaba ha ahaatee, waa in aan iska hadafyada intaan in uu jiro meesha cirro aad u badan iyada oo macnaha.
Angeldoll1 • August 19, 2013 at 7:04 waxaan ahay • Reply
Waxaan aad ula hadal galmo dad kale u diiddan- STD ee, AIDS iyo uurka aan la rabin, waa cawaaqibka xiriirka sida. Haddii mid ka mid eryanayn xiriirka sida, iyagu ma ay baran lahaa oo ku saabsan go'an sax ah iyo dhinacyada qoto dheer iyo ruuxiga ah ee jacaylka halkii damaca. Oo weliba waxaan la ra'yiga aad ka qabto shukaansi agagaarka diiddan tahay ka hor inta aad rabto in aad samayn sababtoo ah “shukaansi ku wareegsan” ma aha shardi u ah in la ogaado xaaska ka nonspouse a. Cibaado dhaleeceeyey / shukaansi la sameeyay aadanaha sida muujinayaa in Kitaabka Quduuska ah, halka isagoo mutiple-hawlgalayaasha, galmo random waa sifooyin xoolaha.
Angeldoll1it quruxsan arinku idinka mid ah in ay ka fekeraan in dhammaan galmada non-guur qasab keenaysaa in “STD ee, AIDS iyo uurka aan la rabin”… laakiin dabcan, mana aad ogaan lahayd in haddii aanad ku qaadan waqti si aad madaxa ka mid ah buugga jir ah oo diif ka heli helaan qaar ka mid ah waayo-aragnimada nolosha.
Waxaad ka eegi waxaa ugu xun. Haddii aad tahay qof qaan ah oo xigmad leh oo ku filan, waxaad hor mari doonaa waxa ku saabsan sida saxda ah. In badan oo aad ka fogaato wax, ugu dhow waxaad u timid in ay. Focus on wanaagsan iyo in waxa aad heli doontaa. Laakiin dabcan Diinta ma idin barin in.
Josh • August 19, 2013 at 7:04 waxaan ahay • Reply
“jacayl kan ka weyn ma laha mid ka badan tan, in qof naftiisa u bixiyo saaxiibbadiis.” (John 15:13) Waxaad ogtahay jacaylka waa haddii aad ogtahay Masiix.
Fadlan sayidow, haddii aad ku socoto in celcelin Qorniinku, ugu yaraan aad samayn karto waa codsan fikraddaada u gaar ah in ay. Waa tixraac, ma guide khudbad.
ayay • October 3, 2013 at 12:25 pm • Reply
Your qaadataan on Qorniinku waa khalad iyo sida aad u malaynayso in aad naftaada saadaalinaya sida isagoo Masiixi ah oo aan raaco aan Kitaabka Quduuska ah, laakiin “tixraacyada” waxaa laakiin doorto in uu ku noolaan aad code gaar ah oo xulatay iyo doorto waxa, haddii ay wax in la raaco in Ilaah waa ku saabsan….
Inta badan waxa aad sheegtay in ay dul taagan waa caqiido been ah.
Gabe Taviano • August 19, 2013 at 7:04 waxaan ahay • Reply
Nice si aad u aragto aad halkan hubkaa Trip! Thanks for ku tukanayeen ii Isbuucaan, Ilaah Hubi in uu ahaa mid wanaagsan.
Waxa ugu waalan oo ku saabsan in aad is guursan si dhallinyarada waa in dhegaha iyo indhaha aad ayaa loo furay inuu Ilaah ka badan in aad dhawr sano ka badan qaar ka mid ah in ay isaga la xiray off for dheer. Waad og tahay inaan Ilaah waa qayb ka mid ah guurka kaliya sida ugu badan ee laba idinka mid yihiin, iyo in ay weyn. Thanks for sharing!
Madeleine Farrell • August 19, 2013 at 7:04 waxaan ahay • Reply
Tani waa hab ah in fikirka fiican. Waan guursaday at 17 iyo ninkayga ahaa 19. Isla mar Maanaan ahayn Christian, iyo sidoo kale, aan kama 'u leeyihiin in ay’ is guursaday. Weli sabab qaar ka mid ah aan ku sameeyey. Waxaan la guursaday ku dhawaad 28 1/2 sano haatan, waa waalidka 5 iyo ayeeyo of 2. Waan jeclahay noloshayda. Ma aha in la yidhaahdo waxaa jiray jeer guurkayaga in mid ka mid ah oo naga mid ah oo kaliya doonayay in ay socdaan iska oo aan marnaba dib ugu soo laabto, ma in la yidhaahdo cadho iyo xanaaq qayb ka mid ah nolol maalmeedkeena Jirin xilli, ama in fikirka nishka dhigay qaladkii ugu weynaa ee nolosheena ma ahayn habka fikirka ah. Laakiin waxaan dambaabney. Oo markii furiinka khiyaar ah ma aha, Ahu waa caafimaad ee waqtiga.
Gabadhayda guursaday at 20 oo ma jirin mid ka mid dhiirigelin ayay abid helay dadka ka. Waxay ma aan fahmin sababta dadku dareemaan waa miciinka u dambeeya halkii barako waqtiga. Xitaa ka mid ah bulshada Christian.
Our ina Dhanka kale guursaday waqti Christmas, at da'da 27. Just lahaa ma ay helin gabadh saxda ah. Hal shay.. wiil / gabar saxda ah waxaa laga sugayaa inay e wiil / gabar saxda ah xataa iyada oo wakhtiyada adag. Just ugu cuslaataan Cross The.
Champions league • August 19, 2013 at 7:05 waxaan ahay • Reply
Waxaan ku heshiin waayeen more. Sidaas dad badan oo u muuqdaan in ay u maleynayaa in guurka waa wayn oo ay jirto gaar ahaan sabab u lahayn in ay “rush” waxaa galay, laakiin waa wax Ilaah waxa uu rabaa in ay isticmaalaan inay ku duceeyaan oo na quduus ka dhig. Waad ku mahadsan tahay boostada!
>> Laakiinse markaan eegay Qorniinka ma aan helin waxyaabo la mid ah, "Guurka uyeelaysaan kuwo la dilo! ka carara!"ama, "Guurka Dhig ilaa aad ma u gelin karaa off mar dambe,"ama, "Heli Kaliya guursaday marka aad aad u gabowday in ay helaan nolol,"ama, "Play duurka oo in muddo ah ka dibna qaado ka mid fiican."
hooyo • December 9, 2014 at 1:48 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay wax badan soo booqato si aan blog – Waxaan qabaa inaan baxay tirada adedrss feed aad u (Waan ku posted in comments aan). Waxaad leedahay qoyska farxo ah, iyadoo jidka ag fadhida! Hambalyo on your guuradii!
Praisemovement • August 19, 2013 at 7:05 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay hufnaan iyo “samaynta Ciise eegi wanaagsan”. ixtiraam Mad waayo sida aad livin'and bringin’ ammaanta hadalka.
Andrea Paige Jackson • August 19, 2013 at 7:05 waxaan ahay • Reply
Taasi waa marag fantastik ah. Oo waa inaad ku posted on iyo guuradii tobnaad ninkayga ayaa! (Waxaan guursaday HORE, in kastoo.) : )
Jcsmsoul • August 19, 2013 at 7:05 waxaan ahay • Reply
ilaah u barakeeyo walaalkiis! waan ogahay waxa u ka dhigan tahay in kasta oo i helay sayidkii dambe ee nolosha iyo i rabtid i guursaday nin cibaado leh hooba leh oo daacad u ah inuu naagtiisa! dayz kuwaas oo ay aad u adag tahay inay helaan in! oo sabab kale oo i rajo iyo baryayaaye i guursado oo ka heli mid ka mid ah waxaa ugu wacan u siinin dareemaan xadgudubka marka jacaylka marka ur guursaday! ilaah u barakeeyo!
Jazmin • August 19, 2013 at 7:05 waxaan ahay • Reply
aad baad u mahadsan tahay mid kasta ma arki doono guurka sida barako. Keliya kuwa ku kalsoon tahay oo rumeeyay Rabbigeenna Ciise Masiix doono. Waxaan u guursaday da'da yar iyo 28 sano igu jirtay iyo ninkayga leeyihiin 3 carruurta u qurux badan oo nolosheena waa la xarrimay u Sujuudeynaa oo aad u sujuuddaan aabbe noo ah oo jannada ku jira. Guurka ma fududa in kastoo, waxa uu leeyahay waa si taxne kore iyo laakiinse nimcada iyo naxariista Ilaah iyo Muslim oo uu mid ka mid doonista waa ay awoodaan in ay koraan. Aad ayaad u mahadsantahay for sheekadaada la yaab leh waa run barako. Eebow sii ha adiga iyo xaaskiisa ku koraan waxaan weydiiso xigmaddii iyo in ka badan oo dhan barakooyinka badan oo aad raalli.
Tachy Musica • August 19, 2013 at 7:05 waxaan ahay • Reply
Waxaan si guursaday “dhallinyarada ah” sidoo, oo tanuna waa barako, waxaan had iyo jeer wada (oo ay ku jiraan gabadhayada dabcan), waxaan wadaagaan wax walba oo, oo midba midka kale caawiyo, ppl qaar ka mid ah u malaynayaa in haddii aad si yar yar guursaday waxa ay noqon doontaa waqti gaaban, laakiin mahad Ilaah caawimaaddiisa ayaannu wax ku dhow 8 sano guursaday iyo ugu muhiimsan ee isku dayaya in ay servin’ Goor kasta Ilaah…Barako
Agopylove09 • August 19, 2013 at 7:05 waxaan ahay • Reply
waa in sidaas laga cabsado!! im 25 oo hishiis la fikirka ku saabsan waxa ka soodagi oo ay la socdaan isagoo naag wanaagsan oo daacad ah isagoo isku dhiiba oo isagoo ilaah sida xarunta had iyo jeer doonaya inuu talada waxa loogu talagalay oo dhan oo kaliya si dhab ah loo oggolaado Masiix hogaanka iyo dhisidda xiriir in dhulka ku adag Masiixa jesus..falling jacayl la our badbaadiye ugu horeysay run ahaantii waa waajib!! isagoo xiriirka in saaxiib u la alllows aad si ay u koraan oo aan la garanaynin jecel run ahaantii yahay iyo ahu waxay bixisaa in jacaylka in u siiyo xaaskaaga.. sidaas greatful for badbaadiye Yaa had iyo jeer waxay bixisaa ..<3
Joe Stevens • August 19, 2013 at 7:06 waxaan ahay • Reply
Waxaan ahay oldee ah kuwaas oo si buuxda u waafaqsan Triplee. In kastoo dabcan waa stroke kala duwan (da ') waayo, dadka waawayn kala duwan. Oo qof kasta waa inuu dumaalo oo ay markii Ilaah loo qorsheeyay. Aniga 50 sano jir ah, guursadeen in aan gabar markii aan ahaa 23 oo iyana waxay ahayd 20! Hadda 27 sano iyo 1 bil ka dib, waxaa jira joogto ah (wanaagsan) rashka noo dhexeeya, weli madly jacayl, saaxiibo fiican oo wada socda in ujeeddada Ilaahay. ganacsan lahaa da'da baan guursaday, waayo, 6 bilood ka dib! Laakiin xitaa kids my waa in ay ogaadaan circumstacces ay Qasab maaha inay isku annagaa, midna waa xaddidayaa Ilaah iyo qorshe iyaga u si sax ah isku.
Femi millionaire • August 19, 2013 at 7:06 waxaan ahay • Reply
Waxaan ahay oldee ah kuwaas oo si buuxda u waafaqsan Triplee. In kastoo dabcan waa stroke kala duwan (da ') waayo, dadka waawayn kala duwan. Oo qof kasta waxaa la guursadaa ay waqti Ilaah loo qorsheeyay. Aniga 50 sano jir ah, guursadeen in aan gabar markii aan ahaa 23 oo iyana waxay ahayd 20! Hadda 27 sano iyo 1 bil ka dib, waxaa jira joogto ah (wanaagsan) rashka noo dhexeeya, weli madly jacayl, saaxiibo fiican oo wada socda in ujeeddada Ilaahay. ganacsan lahaa da'da baan guursaday, waayo, 6 bilood ka dib!
Reverandjeff • August 19, 2013 at 7:06 waxaan ahay • Reply
Waxaan ognahay in ay tani ka mid ah oo dhan aad si fiican u… Just dabaal our sanadkii 13-guurka, oo i ahay 35.. Markii hore ayaan wax ka waawayn isku ii weyddiinaysaa si la mid ah, laakiin waxaan labada kaliya ogaa, Ilaah baa u diyaarisay iyo waxa loogu talagalay. Waxaan yaalana noloshooda kasta oo kale ee daqiiqado muhim halka aan kor ku dhamaaday isagoo barroosinka kasta dadka kale, iyadoo ay noqoto caadi ah Masiixa. Qaybta ugu wanaagsan waa marka aan fursad in aad la hadasho dadka ka yar yihiin kuwa la dhibtoonayo xiriir / guurka hesho iyo waxaan u helaysaa in aad u sheegto maraggayaga gaar ah !!! Sida arrin xaqiiqada, qaar ka mid ah, kuwaas oo wada hadal la JPaul lahaa sano ka hor.. dunida Small !!! Ilaah siiyey kuwa ku doondoona nidaamka QIIMAHA XAQA, oo aan qiimaha our feeraha halkii runnin ka dib markii chickenbones. :)
Jeff Young • August 19, 2013 at 7:06 waxaan ahay • Reply
Oh iyo cajiib ah, na fiiri at http://www.facebook.com/reverandjeff #GotAGodlyDime
Bobshumaker • August 19, 2013 at 7:06 waxaan ahay • Reply
Aabaheey & Hooyo ahaayeen jeclaayeen dugsiga sare iyo waxay guursaday ka dib markii qalin jebinta (labada ahaayeen 18 sano jir ah). Weli waa farxad guursan ilaa maantadan la joogo oo weligayo muujiyaan wax qoomama ah oo ku saabsan noloshooda wada. Noqoshada qof qaan gaar ah guurka bilaabi laga yaabaa in – iyo aragti aad ku saabsan go'aanka muraayad u Waalid. guurka cibaado leh waa yar yihiin oo kala fog ee qarnigii this….Ilaah waa idin barakayn doonaa oo idin sii faraxsanahay ugu yaraan 50 ama 60 sano!
Monique-Jolicia • August 19, 2013 at 7:06 waxaan ahay • Reply
Halkee waa sheeko naagtii ee?
Jeffreycotton7 • August 19, 2013 at 7:06 waxaan ahay • Reply
Waxaan adiga, iyo naagtaada mahad aad u badan, waayo, wadaagaya sheekooyinkooda aad. waxaan ahay 21 iyo dareemayaa i doonayaa inaan iyada oo ku dhowaad xaalad la mid ah. Waxaan kaliya oo aan weli guursaday. Waxaan leeyahay arinkii in sababta ay sugto haddii aad adiga iyo lammaanahaaga waa jacayl, labadaba waa ruuxiga ah, positive, iyo kaamilo dadka kale mid kasta oo indhaha. My iyo gabar aan shaki ku jirin in aynu doonayno inaynu u guursato maalin maalmaha ka mid. Laakiin inkastoo aan labada rabto inay guursato, iyada more of a qaadan waqti; markii qof nooca dunida oo dhan waxaan leenahay. Waxaan ka badan oo qof berri nooc dhaqso aan aan u ballanqaaday ahay. Markaas maxaad u sugaysaa? Iyadu waa gabar aad u caqli badan. Waxay i xasuusineysaa naagtaada, iyo iyada story yar. Fikirka ah in wax laga yaabaa inay jidka gool dugsiga iyo shaqada. Laakiin in badan xagga hadalka kids ka dib markii guurka. had iyo jeer waxaan iyada u sheeg in aanan rabin in ilmaha hore u dhow 30 sano jir ah. Ma doonayo in aan jidhkayga inuu ku soo bilowdo helitaanka taagta daran sababta oo ah da'da, taas oo ka dhigi lahaa way ku adag tahay iyo in ka badan daalo inuu u ciyaaro agagaarka caruurtayda. waxaan doonayaa 7 ugu badnaan iyo 3 ugu yaraan. Sidaas ay wanaagsan si aad u bilowdo da hufan. Laakiin waxaan sii wadi doonaa in ay isku dayaan in ay ka baxdo ku jirto gacanta Ilaah iyo welwelin ku saabsan oo aad u badan.
aneetarh • August 19, 2013 at 7:07 waxaan ahay • Reply
u mahad Trip aad u badan n Jess, n qof kasta Hu DT ayaa la wadaago dhiirigelin ah qaab ama mid d Oda. Hadda waxaan ahay ma sii cabsi of gettn guursaday d xaqiiqda hore gaar ahaan considern aan labada DT Ilaahaaga ah ka jeclaataa. Ilaah BIS in…
Dash • August 19, 2013 at 7:07 waxaan ahay • Reply
Jannon Fitzpatrick, Waxaan oggolahay in Ilaah waa jacayl. Sida kaliya in ay la kulmaan jacaylka dhabta ah waa in ay la kulmaan mid ka mid ah kan ku abuuray jacayl. Inta u dhaxaysa dadka aan waxba heerkiisa in la abuuro karno waxa dhacay haddii ay yahiin Ilaah iyo sidoo hanuuniyo noloshooda jacayl. “jacayl kan ka weyn ma laha mid ka badan tan, in uu naftiisa u bixiyo saaxiibbadiis” Jhn 15:13. Love aan helo qanacsanaanta is a (KevinFerere), ama loo helo qof raali galin lahayd iyo kicin falalkooda koronto ee maskaxdaada. Waxaase xusid mudan, sawir oo ka mid ah “Abuurista Adam” on your page ka yimaado muddo Renaissance ah taas oo ahayd markii fikirka jacaylka iyo shukaansi galay wax muxibada qofka jeestay aan loo eegayn waxa qiimaha qof kale. rinjiyeynta in iniinahoodu ku dhex jiraan waa dhaxaltooyo oo sheegaya in Adam waa meel fog eegid Eebe iyo ka qeyb qaatay abuurkiisa. Kajan waa this, Michelangelo dhamaadka naftiisa arkay wixii uu sameeyey oo ka qoomamooday, isku dayaya in ay isku daraan masiixiga iyo Humanism (Man isagoo qiyaastii waxyaalahan oo dhan). Tani fikirka jacaylka waa meesha waxaa Waxaan qabaa aad ka timid ? taas oo ah wax la mid ah waxay ku dhaqma ee Greek, Renaissance, iyo dhaqanka maanta. Waxaa run ahaantii waa “wax cusub qorraxda hoosteeda”-Sulaymaan, sidoo kale Kitaabka Quduuska ah ka.
Paul Jones • August 19, 2013 at 7:07 waxaan ahay • Reply
hey safar la guursaday tan i ahayd 22 iyo 28 hadda. kaliya lahaa our anv 6aad. ilaah ayaa noo duceeyaan 4 dhashiisu. i baryaynaa in uu sii adiga iyo qoyskaaga barakaynayay.
Danz_17unlocked • August 19, 2013 at 7:07 waxaan ahay • Reply
Tani waa Trip qurxoon, Ilaah si deeqsinimo ah u iyo ur xaaskiisa barakeeyo… iyo kuwa kale b duceeyey laga yaabaa in by this ^ _ ^ <3
Maxaa ka marag suurad wanaagsan oo in wanaagga Ilaah iyo waxa uu samayn karaa in nolosha in ay yihiin gebi ahaanba dhiibay isaga si. Aniga, saygayga waxay wada guursadeen da'da yar (at 24) iyo adiga, iyo naagtaada sida, Ilaah wuxuu arkay taam u yahay inuu wada noo keen, waayo, Ammaantiisu. Our ina guursaday dhallinyarada, da 20 horaantii sanadkan…Dahay :-) oo hubaal inuu helaa wax wanaagsan in uu naagtiisa cibaado. wax Waxaan doonayay isaga iyo waxa barako.
Maxaa article weyn! Aniga, saygayga helay guursan dhallinyarada iyo weliba, waxaan ahaa 22 iyo ninkayga ahaa 25. Waxaan kaliya u dabaal 15 sano guurka. Ciise, na keenay wada dhow sida laba qof oo sanadihii la soo dhaafay, ina baraysaa in “dhiman nafteena” si ay u jacayl wanaagsan oo uu midba midka kale u adeego. Naf jacayl waa wax dumiya tiro ka mid ah guurka ugu.
Waad ku mahadsan tahay rabitaanka in ay afka hore iyo daacad ah oo ku saabsan mawduuca guurka taas oo la xiriirta Kitaabka!
Aniga iyo xaaskayga waxaan u guursaday 21 sidoo, iyo in ay ahayd 11 sano iyo 6 carruurta ka hor (bio / ansixiyay / foster). Anigu ma aan aqoonin ayaan ahaa “aad u yar” in ay guursadaan, Kaliya waxaan ogaa in ay tahay mid ka mid ah Ma aanan rabin in ay ku noolaadaan iyada oo aan! Ilaah ayaa wanaagsan.
Akhrinta u dhexeeya khadadka: waxaan jeclaaday Ciise oo annana waxaannu eryannay horny.
Waxa aan u arkaa inay tani dhacdo waqtiga oo dhan mid ah dadka Masiixiyiinta iyo qabaa dood sida kuwaas oo ah kuwa la dheesho agagaarka dhiirogelin dhabta ah waa u qosol badan. Waxay noqon lahaa dambi badan kaliya galmo, sidaas darteed waa fog ka xigmad in ay ku deg degto ballanqaad nolosha oo dhan.
Ilaah ayaa sheegay in ay bilaabeen in Guurka hubaal waad arki doontaa waxa oo dhan iyada oo loo marayo. Waxaad tahay dhiirigelin ah in dhallinyarada Christian dhallinyarada iyo lammaanaha Trip. Ilaah ha idiin barakeeyo!!
SHAQADA • October 3, 2013 at 2:52 pm • Reply
Waxaan guursaday da'da 21 oo sannaddii la mid ah sida aad safar Lee, in 2009. Oo waxaan iyada ku kulmay kaniisadda markii aan ahaa 16 sano jir, waanu soo wada jirtay muddo ku dhow 8 sano haatan. Waxaan wada adeegi jireen Ilaah la wasaaradaha AYCM, gaarey baxay tuulooyinka iyo wadaaga ereyga Ilaah dalka Filibiin. Waxaan u sheegay kasta maalin kale “Waan ku jeclahay sababtoo ah waxaan aad u aragto sida badan aad u jecel Ilaah”. Aan abid kama qoomameeyo iyada weydiisanaya iyada gacanta ee guurka. ee la soo dhaafay ayaa 4 sano guurka ayaa barako.
https://twitter.com/KEVINFERERE <<< waa waa nin THIS?? lol
ereyga Ilaah runtii waa wayn. Maahmaahyadii 18:22 si cad u qeexayaa this out.
”Ku alla kii afo helaa wuxuu helaa wax wanaagsan, iyo raalli Lord'' ah.
My qaadataan, waayo, ku alla kii uu doonayo in uu guursado waa in ugu horrayn waxa weeyi weydiiso jihada Ilaah ee doorashada lamaanahaaga saxda ah. Waxaan sida aadanuhu shouldnt sameeyaan doorashooyin noo gaar ah iyo forcifully Ilaah weydii in ay ku barakeeyo. Halkii, waa in aan is dhiibaan guud addeecidda, gaadhaan fadliga Eebe ee korkiina iyo weydiiso hanuun inuu raaco jihada waayo nolosheena.
Waxaan ixtiraamaan this aad u badan!! Its si yididiilo leh sababtoo ah waxaan lahaa rabitaan ah inay guursato abid tan iyo markii aan ahaa 6 sano jir ah iyo unahay of dad baa igu rido, waayo,. Siyaabo badan ayaa waxaa abuuray gelyo xumada ii in. mar Waad ku mahadsan tahay this!
Wax yar ka badan 35 sano ka hor waxaan guursaday gabar aan dugsiga sare. annaga ahaayeen 18, ku dhowaad 19. Waxaan u duwaan badan iyo aabaheey xataa rajaynayo inaan heli doono furay iyo hesho dhakhtar. Marka Ilaah u qabanqaabisa guur aysan macno ah waxa da'da aroosadda oo aroos. barakooyinka badan!
Waxaan la guursaday dhallinyarada iyo sidoo (20 si sax noqon). Hadda at 32, Waxaan dareemayaa sidii aad la guursan karaa da 'kasta siiyey iyo waqti kasta la siiyaa ku alla kii… oo Ilaah u isticmaali doontaa qof in isaga jecel yahay in xaalad kasta oo u soo jiidi xaggiisa u dhaw in ay qofka in… aad leedahay si aad u noqon oo dhan waa diyaar u ah inay quduus bay ahaan sida, Isagu waa quduus. Taasi waa sababta Anigu ma aaminsani jiro “mid ka mid ah”… Qof kasta oo doorta in aad is guursanaayo, noqday “mid ka mid ah ayaa” felisin waayo, :)
laakiin dabcan tani run tahay oo kaliya haddii labada kuwo Rumayn
Waad ku mahadsan tahay si ka badan. Aniga iyo xaaskayga waxaan leedahay sheeko la mid ah. Saaxiib posted maanta this oo ay ahayd waxa aan u baahnaa. Ammaana Rabbigeenna Ciise!
Waad ku mahadsan tahay this article! Aniga 36 sano jir ah oo aan u soo guursatay for 19yrs…Haaa, waxaan ahaa 17 markii aan ninkayga jir 18yr guursaday! Waxaan leenahay lix kids, Rabbigu wuxuu jecel oo aad ugu faraxsan :) aan lagu weydiiyo su'aalo la mid ah waqtiga oo dhan iyo halka laga yaabaa in aanay doorasho caanka ah ama sax ah u doorato badan, Anigu waxaan ahay maalin kasta si farxad iyo kalsooni in aan qaatay go'aan sax ah noo.
Tani waa cajiib ah. Waan ogahay badan dadka qabaa tani waa qaladkii ugu weynaa ee noloshaada. Aniga 22 oo waxay run ahaantii la this ka fiirsaneysa qof, waan garanayaa iyo jeclaa tan iyo markii aan sanad sophomore ee dugsiga sare. Waxaan hubaa wax aan qorax iyo rainbows kuu, oo innaba uma aan filin in ay mar ii. Waxaan idinku ammaano inay iska Dhigaan dhan ee niyadjabka iyo eegaya sawirka weyn iyo waxa aad dareemay Ilaah waa idin keeni. Haddii mid ka mid kale ma jiro waa ku faraxsan yahay, waayo, aad, Anigu waxaan ahay.
Kim Hunter • October 4, 2013 at 8:30 waxaan ahay • Reply
ninkayga aan la kulmay ee 14 waxaan guursaday markii aan ahaa 21 wuxuuna ahaa 23 waanu soo wada muddo 22 sano oo guursaday 15 kuwa 22 waxaa jira wax qalad ah la is guursan dhallinyarada ay kaliya sida qofka uu eegayaa nolosha….maxaa yeelay, run ahaantii aad lifr waa maxay waa inaad u samaysaa….iyo haa aniga iyo ninkayga la badbaadiyey iyo kuwa Rumeeyey Eebe iyo waxaan ku nool yihiin nolol our isaga u ilaah wax waluba waa u suurtoobaan gaar ahaan waxba a guurka dheer healthly jecel fudud laakiin ilaah aad samayn kartaa…….barakoobi!!
Xusuuso: Maxay sababta aan u guursado si dhallinyarada? - Kingdom Cakers Kingdom Cakers
Cherisse • October 4, 2013 at 9:43 waxaan ahay • Reply
Maxaa barako in la ogaado Rabbiga iyo si ay u fahmaan oo ereygiisa. Waxaan jeclaan lahaa waxaa jiray dad badan oo aad u eg. Ha u ogolaan Devil aad niyad. Waxaan ogahay inuu meel walba waa.
Aniga iyo xaaskayga waxaan guursaday markii aynu 22 iyo waxaan lahaa waayo-aragnimo la mid ah. Friends in ay badbaadeen iyo unsaved doonayay in uu ii soo sheeg waxaan haystay nolol ka badan in ay ku noolaadaan. My jare I xusuusiyay Trine oo dhan iyo in la xafladeeyo aan samayn karin. My “ku dhow” saaxiibada sharaxay in ay jireen kalluunka kale ee badda ku jira si ay u sahamiyaan. Well, waxaan dhab guursaday ku dhawaad ​​waqti isku mid ah 3 Labada qof kale our da'da sameeyey! Waxaan nahay laga tirada badan yahay, laakiin hubaal keligay ma iyo waxa uu ku dhiiri in la xasuusto in.
By nimcada Ilaah ee aan kaliya u dabaal 3 sano iyo waxa ay ahayd mid laga cabsado! Waad ku mahadsan tahay qaybsiga Trip!
My qaadataan noqon lahaa in, haddii aad doonayso in aad is guursanaayo si dhallinyarada, aad si fiican u ogaadaan cawaaqibka sidaas samaynaya. Waxaa aad u adag in xitaa ugu fiican ee xaaladaha. Haddii aadan diyaar u yihiin in ay ka shaqeeyaan ugu adkaa ee aad weligaa shaqeeyay oo gebi ahaanba allabari oo badan oo niyad iyo xunuun ka qaban, ha saxiixin ilaa it for. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ugu adkaysan karaa (iyo qaar ka mid ah dadka ku samayn) haddii noqon kartaa faa'iido waqtiyada.
Waxaan jeclahay tani aragti kitaabku ku salaysan. Waa dhex American Christian dhif, halkaas oo qaab-dhismeedka dhaqanka iyo bulshada waa sidaas anti-guurka, si ay u arkaan qof dhalinyaro ah, xataa qof waayeel ah, waxay leeyihiin sida aragti ruuxa baaluq on qiimaha hay'ad Ilaah. Iyada oo ku saleysan badan oo comments aan akhriyey, Muuqaalkani codadka si shisheeye si ay dadka, xataa in Church, sababtoo ah waxaan la oggol yahay inuu ku tiirsado nafteena xagga caadooyinka bulsho ee maalin halkii runta baybalka iyo waxa Eebe ka haya lagu qiimeeyo iyo urursan. Duceeya aad safarka, sii wadaago Injiilka iyo runta ah ee ereyga Ilaah ka dhigay wax ku ool ah oo dhab ah in nolosha rumaystaha ee.
PastorRob • October 5, 2013 at 6:55 waxaan ahay • Reply
Waxaan doonayaa in aan kuu sheegi Trip- Lee waan guursaday 2 bilood ka dib baan u jeestay 21. Ilaah waa dhan waxa ay in? Waxa uu ahaa oo dhan waxa ay in inkastoo dadka opinion iyo sababaynta on sababta aan waa in aan is guursano oo aan loo baahan yahay in ay sugaan. Man Ilaah waxaan is guursadeen 16 sano hadda la 2 gabdhaha u qurux badan oo aan ahay si fiican greatful inuu Ilaah u ah sida Ilaah doonayo caqliga leh, jawharad qaali ah oo sharaf leh. Quruxda saabsan maragga loo ahaa loogu tala galay si aad u sheeg!!!
Xusuuso: Single v. guursaday… | Macnaha of Life
Mavis • January 28, 2014 at 10:10 waxaan ahay • Reply
Waxaan leeyahay talo dhamaan dadka da'da yar. Haddii aad tahay 18 ama ka badan, bilaabi raadinaya xaaska! Sex ka baxsan haddii guurka idin keeni doonaa waxba xunuun, leaness nafta iyo caafimaadka u xun, jidhka iyo maskaxda. Isqabin, farxad iyo sii xoojinta dhaqaalaha! Waxaad ka heli kartaa wax badan oo dheeraad ah ku sameeyey oo wuxuu ku raaxaysan lufe si ka badan haddii aadan keligaa. waalidiinta u badantahay in lagu helay furay waayo, ma ay raacaan Quluubtooda in ay dhalinyarada! Ma ahan in aan meel si aad u sharaxdo oo dhan, laakiin aad waxaa la dhisay in lagu qiyaasey. Bilow samaynta yor liiska waa in ay leeyihiin sifooyin isla markiiba iyo guursadaan dhallinyarada inta aad qalbigiinna oo dhan waxay leeyihiin in la siiyo. Aniga 53 oo aad u grayeful si farxad leh waa la guursan. Waxaan la guursaday 31 -jeer oo saami qaracan badan haddii khasaariyey dhalinyarada jidka jidka aad u soo daahay. Rajadii sameeyo haddii aad ahaan doono nin xigmad ee dhallinyarada iyo waxa ku raaxaysan by joogo waxaa ku jira!
GOSPELMAGDOTCOM • February 6, 2014 at 8:33 waxaan ahay • Reply
Gacaliye Trip Lee,
Waxaan doorbida reading articles aad.
waxaad na siin kartaa ogolaansho si ay u turjumaan articles aad galay Faransiiska oo ay ku daabacaan our website: gospelmag.com?
Aad ayaad u mahadsantahay ka hor aad jawaabta.
Best in Masiix,
My saaxiib ii soo iibsaday kitaabkan markii aynu da'yarta ku saabsan isagoo dhallinyaro ah, naag Christian sharaf leh. Dabcan waxaa lagu dhiirigelinayaa sugaya ilaa ka dib markii guurka iyo wax kasta oo lahaa Aayado oo dhan. Waxaa ku xusan bay u keentay inay istoosiso in Ilaah ma doonayo noo taariikhda. nidar Waxaan samaystay wixii aan doonayay in xuduudaha la guys (Waxaan qabaa inaan ku dhow ahay si buuxda u sameeyo outgrowing aan xishood). Waan badbaadin lahaa waxyaabaha qaar guur laakiin on iyo off la soo dhaafay 2 sano Waxaan helay niyad-. Waxaan dareemay in aan cidlo. Waan la yaabay waxa i haya iyo haddii aan ku filan ahay. Anigu ma ihi. Anigu garan maayo aayadda kasta bible. Waxaan u baahan tahay inaad wax badan ka sii baran. Waxaan isku dayayaa oo aanan rabin in la barto oo kaliya nin kasta sababtoo ah waxaan noqon kartaa qaracan iyo hoos uu ii keeni kartaa Jidka Eebe ma i hoos u doonayaa, laakiin waxaan ka heli cidlo. Mar walba waa ay qurux badan si ay u arkaan dadka kale ee dhallinyarada ah ee jacaylka. Waa xataa WANAAGSAN haddii ay guursatay tahay iyo waxaan ogahay in ay wax wanaagsan uma noqon masayr ah, laakiin qof kasta ayaa sheegay in “oh, oo waxay u iman doonaa inta lagu guda jiro waqti AAD”. Waxaan u maleynayaa in ku saabsan si joogto ah waayadan. Waxaan la kulmay this nin aad u fiican. Waxaan leenahay dad aad u la mid ah laakiin waxa uu sheegay inuusan u aadaa kaniisadda. Waxa uu sheegay in uu aaminsan yahay in Eebe iyo waxaan ogahay Ma naftayda kaamil laakiinse anigu uma aan ku caawin kartaa, laakiin la yaabi waayo, waxaan aadan u malayn in uu si firfircoon uga Ilaah doonaya haddii aan doonayaa inaan ka xumahay wax. Dumarka aan u malaynayeen in ay isku dayaan iyo nin aan maqlay beddelo. Waxa ay keenaysaa in ay niyad jab la filayo. Well, daaleen sugitaanka Waxaan ahay. Waxaan u maleynayaa in aan ku baran doonaa jidka adag. inaan anigu ma aan galmo in kastoo. waxaan ahay 23 oo weli adag u taagnaato on laakiin waxaan ahay wareersan sababta aan ma lihi hadda u qalmaan. Qof kale oo uu helo waxa ay doonayaan. Waa si wax aad looga xumaado in aanan joojin karo fikradihii guys. Waxaan aad si niyad-mararka qaarkood. Haddii aan guursadaan nin iyo ma uu bedelay aan la noqonina kuwo ku xidhan doonaa? Dadka qaarkood waxay leeyihiin wax kasta oo. Oo waxaan ma leh lacag. Waxaan kaliya doonayaa qof ii maqsuuday. Waa aad u badan si ay u sharxaan.
weli waxaad uun tahay 23! :) Ha welwelin ku saabsan ma u hesho “xaq u” mid ka mid ah, ma jiro hal qof waxaa in uu yahay dookh fiican. Iyo caaddil inuu caddeeyo: WAXAAD TAHAY u qalantaa. Waxaa jirta sabab ah in aad adiga iyo Dhulka waxa ay kala yihiin waqtigan. Waxaad tahay qaali ah Ciise, akhriday oo sheegan ballammada marka aad bilowdo in aad u malaynayso in aad aan u qalantaa. My jecel yahay: “Weligay idinma ka tagi doono ama aad ka tagtaan.”
Qof waan ogaa dhawaan helay furay, iyo arrin weyn in ay is ahaa in ay ahayd Mu'min ah oo isagu kuma uu jirin. Go'aanka waxaad yeelan doontaa si aad u noqon doonaa “waa Ilaah u qalantaa?” Ka dhig Rabbiga oo aad qalbigiinna oo dhan raadinaya, iyo HE kuu tilmaami doonaa. Wuxuu idinku wadi doonaa. Waxa uu ku siin doonaa dhiirigelin aad u baahan tahay marka aad dareentid naxdin iyo niyad-. Wax baan helay mid wax tar leh waa akhriska Kitaabka si cod dheer ka hor inta aan sariirta tago, iyo gaar ahaan marka waxaan dareemayaa hoos iyo weerar ka soo furtay cadowga. Ma ogid waxa Eebe kaliya hareeraha derbiga geeskiisii.. haddii keliyahoo aad sugto. Waan ogahay waxaa codadka si adag oo daacad ah, dhibsado, laakiin haddii aad u dhawri doonaa Rabbiga doonaya, Waxa uu aad u dhergin doonaa in xilli ciyaareedkan. Waxaa jirta sabab ah aad ku sugan tahay xilli ciyaareedkan! ma garan kartid sida Ilaah u isticmaali doonaa inuu marag u noqdo caawiyaan gabdhaha kale ee dhallinyaro ah oo la rafanaya wax la mid ah! :) Waxaan rajaynayaa in this caawisay in hab qaar ka mid ah! Barako!
tshireletsopreciousntumo • November 7, 2014 at 2:43 waxaan ahay • Reply
Tani waa waxa aan u baahnaa in la maqlo, mahadsanid iyo ahu ku barakeeyo
Micheala • March 22, 2015 at 8:32 waxaan ahay • Reply
Waan guursaday at 21 oo ay ahayd qurux badan …
Waxaad ku caawin karin, kuwaas oo aad jacayl leh ama marka aad jacayl iyaga la,
Waxaan marna kuma fekerin inaan noqon doono nooca in ay guursadaan dhallinyarada iyo ka maqnaan doona on the “wax xiiso leh” nolosha .. laakiin i Uma maleynayo i sameeyey, Waxaan kaliya la wadaago aan “wax xiiso leh” qof aan jeclahay oo aan ka fekeri karaa nool oo aan.
Gisselle • March 28, 2015 at 7:41 waxaan ahay • Reply
Hi Waxaan ahay Gisselle waxaan ka Honduras ahay. waxaan ahay 18 sannadood jirtay iyo saaxiibkay waa 19. Waxaan la kulmay 15 bilood ka hor in kaniisaddiisa ku taal New York! Waxaan ku nool Honduras.. Sidaa darteed waxa ay ahayd xiriir masaafo dheer. Waxaan ahay in aan sanadka labaad ee kuliyadaha iyo si uu. Waxaan la hadlay oo ku saabsan is guursan. Iyo qaar ka mid ah qaraabada iyo odayaasha ka kaniisaddiisa inaga taageera iyo u sheeg na waa waxa ugu wanaagsan in la sameeyo. Waxaan weli cabsan oo ku saabsan ahay.. Hooyaday ma aha mid aad u furan igu saabsan is guursan si dhallinyarada iyo sidii walaashey. Waxaan la tukanayay tan iyo markii aan marka hore u maleeyay oo ku saabsan guurka sida wax macquul ah. Haddii aad i qori kartaa inaan email i u mahadisaan!
Waxaan guursaday 21 sano ka hor. waxaan ahaa 19 iyo ninkayga ahaa 21. Waxaan ayaa barbaro ku dhow in uu midba midka kale oo ay Ilaah u. Saddex kids ka dib waxaan rajeynaynaa in aan soo socda 20.
kaliya waxaan doonayay inaan idinku mahad naqayaa sida weeraryahanka si toos ah in aad erayga Ilaah ku wacdiyaan. Waxaan daawaday 'Fallin’ music video maalin tamashle iyo jirrabaaddaha ka dib iyo dareemeysaa in Ilaah la hadlay oo xaq u galay waxa aan maraya. Gift The cajiib ah Grace in aan wadaagno aan la qiyaasi karin ama Yeesheen siiyo. Waad ku mahadsan tahay wax badan, waayo, indhahaygu dib-u-furitaanka wax sidaas aasaasiga ah ee aan Ilaah la socdaan. Sidoo kale waxaan ka baryaynaa in Ilaah idinku barakayn doonaa adeegiddaada.
Marka Ilaah idin tusiyo qof oo qofku leeyahay hamiday isla waayo, Ilaah wuxuu adiga iyo diyaar u ah inay aad ula socotid jidka oo dhan. waxa macno ah ma waxa da'da, mar mar ku timaado aad guursato. Wixii waa kaliya isaga ku qiro in dhammaan jidadkaaga, uu ka dhigi doonaa Waddooyinkiisa toosan (Maahmaahyadii 3:6). Just leeyihiin hamiday iyo jacaylka Ilaah, waqtiga saxda ah wuxuu ku siin doonaa adiga iyo helpmate kuwaas oo isla kiin taagi doonaa oo dhan iyada oo loo marayo. Ma qayb aan doonayaa, ka dibna ha qeyb Ilaah. In ALL jidadkaaga isaga ku qiro, dhigi he'ell aad jidka toosan.
Ninkeyga waa 3/4 madow iyo caddaan quarter ah.(Anigu waxaan ahay cad). Ninkayga waan guursaday oo dhallinyaro ah ayaa sidoo kale aan 18 u socdaa 19 iyo ninkayga ahaa 20. Dadka aan noo sheegay in ay, waxaan samaynayeen qalad iyo soo diri doonaa in furiinka. Waxaan ma uu dhegaysan waxaan helnay xaas, waxaana haatan ku jirtay 16 sano. Ilaah waa in ay gacanta ku.
Kevin–waxaad moodaa in aad wax yar hoos u leeyihiin. Oo aad shaqeysid oo aad jidka kor u. sii wado, kid! Dhamaadka, si aad naftaada iyo sidoo ogaan badh waa inta badan vattle ah, inkastoo qaladaad kasta. Barako!
Waa hagaag, waayo, dadka halkaas in la duceeyey nasiib aad u fiican la NO dhibaatooyinka caafimaadka oo dhan iyo in la guursaday iyada oo qoyska ka mid ah oo leh lacag aad u badan sida xaqiiqada ah waxay leeyihiin wax badan in ay aad u mahadisaan waayo tan iyo markii ay dhab ahaantii waa in ay leeyihiin sabab NO cawdaan marka badan oo naga mid ah waa in AANAY nasiib at dhan in kastoo qaar badan oo idinka mid ah ma heli aad u yar oo ay jiraan wax badan oo idinka mid ah ayaa weli wada maanta guursaday.
aad u soo jeedin uu u yimid inuu elivate xerada on jimcaha 24/6/2016
Aniga, saygayga guursaday horaantii sanadkan. Isagu waa 22, oo anna waxaan ahay 21. Waxaan mar walba ayaa la weydiiyay sababta aan u lahaa “Tuur yaraantaydii iska” ama sababta aan xitaa u malayn ku saabsan is guursan ee jaamacadda. Waxaan si lama filaan ah u hesho comments ugu waxyeello badan haweenka ka weyn ka u muuqda in ay eegaan soo dhaadhac oo ii on. Waa qaracan in dadka kale ma garan karaan in lay dhab ahaantii ku riyaaqayaa yaraantaydii qofka aan ugu jecel yahay adduunka ugu. Waa wax laga xumaado marka dadka (xitaa ka ab ka weyn) u malaynayaa in ay u wanaagsan oo loogu talagalay dadka in 20 ay ku wareegsan seexan, laakiin markii ay guursadaan waa naxdin leh oo aad u xun. kaliya waxaan rajaynaynaa in guurka loo Waxyoodo ahayn karaa dadka kale in ay qaataan boodboodi marka ay dareemaan diyaar, iyadoo aan loo eegin waxa ay bulshadu u sheegayaa.
The xaqa Aad Sad • November 27, 2017 at 8:09 waxaan ahay • Reply
Markaas waxaa jira dad badan oo naga mid ah dadka wanaagsan keliya ayaa runtii rajeynaya in ay la kulmaan qof dumar ah oo wanaagsan si ay u degaan hoos leh, laakiin nasiib daro waxa uusan weli dhacay noo. Oo raggii iyo dumarkii ku jiray oo aad aad u barakaysan inuu la kulmay mid ka mid kale oo ay leeyihiin qoyska ka mid ah oo aad runtii leedahay si aad u badan si ay u shukriya.
Thanks Trip unahay. Muddo sanado ah aan la naftayda u sheegay in aan kaliya ka heli kartaa xaas ee la soo dhaafay da 'gaar ah. Laakiin, hadda waan garanayaa wanaagsan.